Gịnị bụ Dropshipping na otu o si arụ ọrụ | ECommerce ozi ọma
Gịnị bụ Dropshipping na otu o si arụ ọrụ
Susana Maria Urbano Mateos | | Dropshipping, Ngwaọrụ
El Ntufu bu ihe di iche banyere Ecommerce ebe ụlọ ahịa anaghị edebe ngwaahịa ọ na-ere na ngwaahịa; Kama, mgbe erere ngwaahịa, a na-azụ ahịa ahụ n'aka ndị ọzọ wee zigara ya onye ahịa ozugbo. Nke a pụtara na onye ahịa ahụ anaghị ahụ ma ọ bụ megharịa ngwaahịa.
Ndị ọzọ okwu, na omenala e-commerce logistics gbanwere kpamkpam, ebe ọ bụ na ya na Dropshipping, ụlọ ahịa dị n'ịntanetị bụ naanị ọrụ maka ijikwa iwu nke ndị ahịa, akwụkwọ ọnụahịa na ọgbọ nke nchekwa data. Ọ bụ ụlọ ọrụ na-ere ahịa nke na-ahụ maka ịchekwa, nkwakọ ngwaahịa na ibupu ngwaahịa ndị ahịa ahụ maka ụlọ ọrụ dị n'ịntanetị.
Nnukwu ihe dị iche n’etiti Ntinye na ụdị ahịa ọdịnala, bụ na onye ahịa nke na-ere anaghị enwe ngwa ahịa. Kama nke ahụ, ndị ahịa na-azụta ngwa ahịa sitere n'aka ndị ọzọ dịka iwu kwesịrị imezu. Akụkụ nke atọ a bụ onye na-ere ahịa ma ọ bụ onye mepụtara ngwaahịa ahụ n'onwe ya.
N'ezie, Ndobe onwe ya nwekwara uru na ọghọm ya. Maka ndị na-ebido ebido, na-achọghị nnukwu ego, ọ ga-ekwe omume ịmalite ụlọ ahịa Ecommerce na-enweghị ntanetị na-etinyeghị ọtụtụ puku dollar na ngwa ahịa. Ma ọ bụ na ị ga-echegbu onwe banyere ijikwa ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ maka ụlọ nkwakọba ihe, nkwakọ ngwaahịa ma ọ bụ mbupu nke iwu, ị gaghị echegbu onwe gị gbasara njikwa nke nloghachi na mbupu ụgbọ mmiri.
N'aka nke ọzọ, na ọ bụ ezie na mbụ mmefu bụ ntakiri, na oke uru n'ezie anyị ole na ole. Enwere ọtụtụ asọmpi na niche na mgbakwunye na ọ dabere na ngwongwo nke ndị ọzọ. Ọbụghị naanị nke ahụ, mgbe gị na ọtụtụ ndị na - eweta ngwaahịa na - arụ ọrụ, ọnụ ahịa ụgbọ mmiri dị mgbagwoju anya, nke n’ikpeazụ nwere ike inwe mmetụta kpọmkwem na ọnụahịa onye ahịa ga - akwụ.
Banyere ma usoro ahịa a ọ bara uru ma ọ bụ na ọ bụghị, naanị ịsị na n'agbanyeghị na ọ nwere uru doro anya, ọ bụkwa eziokwu na ọ na-abịa na ọtụtụ mgbagwoju anya na nsogbu ndị chọrọ nlezianya atụmatụ iji mee ka azụmaahịa ahụ nwee ọganiihu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Ngwaọrụ » Gịnị bụ Dropshipping na otu o si arụ ọrụ
Eziokwu bu na ezigbo ihe nlere (agaghi m etinye webusaiti m)
Mana ọ chọrọ ọtụtụ ọrụ dịka weebụsaịtị ọ bụla
Uru bụ lstock isiokwu
Emere m ya na tiendawebonline.es ma enwere m obi uto.
Andrea ụgbọ ala dijo
Ọ bụrụ na ihe ị na-achọ bụ ịmalite ụwa nke ịda mba, ana m akwado ka ị banye na ibe BigBuy. Ọ bụ otu n'ime ndị na-ere ahịa na-ebubata nnukwu mmiri na Europe niile. Mụ na ha na-arụkọ ọrụ ihe karịrị otu afọ, obi dịkwa m ụtọ na ọrụ ha. Ha na-edozi nsogbu ọ bụla ngwa ngwa o kwere mee ma na-anwa ime ka ndụ gị dị mfe mgbe niile.
Zaghachi Andrea Car
Ngwaọrụ dị n'ịntanetị maka ndị ọchụnta ego
Ohio, Isi Obodo Ecommerce nke United States